पशुपतिमा नेपाली भट्टका सात दिन |
पशुपतिमा नेपाली भट्टका सात दिन
8 September, 2017 | Bhawana Pathak | 1145 Views | comments
विद्रोहबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नु नै चौतर्फी चर्चाको विषय थियो । त्यतिखेर माओवादीलाई जनताले पहिलो दलको स्थान पनि दिएका थिए । सत्तारोहणको सुरुवाती अवधिमै प्रचण्डले समाजमा तरंग पैदा गर्ने केही कदम चाले । एउटा कदम थियो, पशुपति मन्दिरमा नेपाली भट्टको नियुक्ति । भारतीय भट्टले मात्रै निरन्तरता पाउने पशुपति मन्दिरमा इतिहासमै पहिलोपटक डा. विष्णुप्रसाद दहाललाई प्रचण्डले भट्टका रूपमा नियुक्त गरे । तर, यो निर्णयको व्यापक आलोचना भयो । १० दिनमै सरकारले डा. दहालको नियुक्ति बदर गर्नुपर्‍यो । तीन दिन गुप्तवास बस्नुपर्ने भएकाले दहालले पशुपतिमा जम्मा सात दिन मात्रै पूजा गर्ने अवसर पाए ।
पशुपतिका भट्टलाई यस्ता नियम
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिका भट्टहरूले राजीनामा दिएका थिए । ती भट्टहरूले १० देखि २० वर्षसम्म पशुपतिमा काम गरेका थिए । किन राजीनामा दिए भन्ने भेद त खुलेन । तर, मेरो अनुमानमा जंगलबाट आएको माओवादी सरकारमा आफ्नो सम्मान नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले राजीनामा दिएका हुन सक्छन् ।
अर्को मलाई लागेको कुरा– मन्दिरमा भट्टले लामो समय काम गर्न सक्दैनन् । किनभने त्यहाँ पुजारीका रूपमा काम गर्दा धेरै खट्नुपर्छ । जाडो–गर्मी जस्तोसुकै समयमा पनि बिहानै नुहाएर दैनिक ६–७ घण्टा पूजामा लाग्नुपर्छ । भट्ट भइसकेपछि निश्चित अनुशासनमा बस्नुपर्छ । खानपान, बोलीचालीदेखि पोसाक पहिरनसम्म निश्चित आचारसंहितामा बाँधिनुपर्छ । प्रोटिनयुक्त खाना खाँदा अपच भएर दिसापिसाब लागिराख्ने भएकाले धेरै प्रोटिनयुक्त खाना खानुहुँदैन । एकदमै सादा खाना खानुपर्छ ।
पशुपति धेरै लामो ऐतिहासिक परम्पराबाट दीक्षित हुँदै आएको शास्त्रीय पद्धतिलाई अनुकूलन पारेर अघि बढेको मन्दिर हो । त्यहाँ पूजा–आजालगायत केही विषयमा थोरै तल–माथि हुँदा त्यो झै–झगडाको बिउ बन्न सक्छ । भारतीय वा नेपाली जो पुजारी भए पनि मन्दिरको विधि–विधान खण्डीकृत हुनुहुँदैन ।
यसरी भएँ पशुपतिको भट्ट
पशुपति मन्दिरमा पाँचजना भट्ट हुन्छन् । पाँचमध्ये एकजना मुख्य भट्ट हुन्छ । चारजना पशुपति मन्दिरमा र अर्का एकजना पशुपति नजिकैको वासुकीनाथ मन्दिरमा रहन्छन् । त्यसवेला पशुपति मन्दिरमा भएका पाँचजनामध्ये चारजना भट्टले राजीनामा दिएका थिए ।
त्यहीवेला प्रधानमन्त्री कार्यालय, संस्कृति मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका निकाय सकेसम्म नेपालकै भट्ट राख्ने नभए भारतीय राख्ने निष्कर्षमा पुगेका रहेछन् । ती सरकारी निकायले १५–२० जना डिग्री उपाधि लिएकासँग परामर्श पनि गरेछन् । तर, पशुपतिको पूजाआजाका विषयमा सन्तुष्ट हुन सकेनछन् ।
म नुवाकोटबाट २०३८-३९ सालतिर उपत्यका प्रवेश गरेको मान्छे । ०४१ पछि १२–१५ वर्ष भारतको वनारस विश्वविद्यालयमा पढेँ । त्यसपछि नेपाल फर्किएर महोत्तरीको मटिहानीमा धर्मकर्म गरेर बसेँ । त्यो ठाउँमा करिब १२ वर्ष बिताएँ । यसपछि केही एकेडेमिक काम गर्न दाङको महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा आएको थिएँ । त्यति नै वेला पशुपतिमा भट्ट खोजी हुँदै छ भन्ने खबर मेरो कानमा प¥यो । सम्बन्धित पक्षलाई मैले धर्मकर्म, तन्त्र, विधिविधान सबै आउने जानकारी गराएँ । पुशपतिको पूजाआजाका विषयमा निरन्तर चार दिनसम्म कुरा भएपछि मसँग शैक्षिक बायोडाटा मागियो । पण्डितले मेरो बायोडाटालगायत सबै जन्म कुण्डली पनि हेरे । सरकारी कर्मचारीदेखि पण्डितहरूसमेत मैले पूजा गर्न सक्ने निष्कर्षमा पुगेछन् ।
११ पुस ०६५ मा मलाई बोलाए । मेरो विवाह, खानपिन, मन्दिरभित्रको आचारसंहितालगायत विषयमा सोधियो । पशुपति मन्दिरको मूल भट्टले विवाह गरेकै हुनुपर्छ । विवाह पनि सजातीयमै गरेको हुनुपर्छ । पुजारीको विर्य बिग्रेको हुनुहुँदैन । मासु तथा यौन उत्तेजना हुने खाना नखाने हुनुपर्छ । आचारसंहिताअनुसार म पूर्ण भएँ । अनि, १३ पुसमा मलाई नियुक्त गरियो । मैले नियुक्तिपत्र लिएँ ।
एउटा कुरा बोलेको अर्कै छापिएर आएछ
नियुक्तिपत्र लिएलगतै केही सुझाब दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । मैले केही सरकारी अधिकारीलाई सुझाब दिएँ– सबैभन्दा पहिला, भारतीय भट्ट हटाएर नेपाली भट्ट राखेको भन्ने सन्देश नहोस् । दोस्रो, पशुपति मन्दिरमा माओवादी कार्यकर्तालाई भट्ट नियुक्त गरियो भन्ने सन्देश जानुहुँदैन । किनभने, म माओवादी पनि होइन र राजनीतिका कुरा खासै जान्दिनँ । म पूरै धार्मिक विधि–विधान जान्ने मान्छे मात्र हुँ । यी दुई आरोपबाट जोगिएर बोल्नुहोला र काम गर्नुहोला ।’
त्यसपछि भट्ट नियुक्त भएपछि धार्मिक, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेँ । आफ्ना गुरुसँग आशीर्वाद पनि लिएँ । नियुक्त भएको दिन बेलुकातिर फोन गरेर केही पत्रकार जयवागेश्वरी मन्दिरमा भेट्न आउनुभयो । पशुपतिको इतिहासमै पहिलो नेपाली पुजारी हुनुभएछ भन्दै प्रश्न सुरु गर्नुभयो । मैले सबै प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरेँ । एउटा प्रश्न सोधिएको थियो– अब के गर्नुहुन्छ ? ‘मानवता र पर्यावरणका लागि पूजा गर्छु,’ मैले जवाफ दिएको थिएँ । तर, भोलिपल्ट पत्रिकामा ‘नेपालीको नाममा पूजा गर्छु’ भनेको भनेर आयो । त्यो समाचारपछि हंगामा भएछ, नेपाली पुजारीले नेपालीकै नाममा पूजा गर्छु भन्यो भनेर ।
तीनदिने त्यो गुप्तवास
१४ पुसमा गुप्तवास बस्ने कुरा भयो । गुप्तवास बस्नुअघि कपाल खौरिने र नुहाउने गरियो । गुप्तवासका लागि पशुपति मन्दिरभित्रैको एउटा ठाउँ व्यवस्था गरियो । पुस महिनाको जाडोमा घाम नलाग्ने, भुइँमा सुत्नुपर्ने, अन्न खान नहुने, यी सबै आचारसंहिताभित्र रहेर बसियो ।
यो अवधिमा हाम्रो देशको सभ्यतालगायत धार्मिक अनुष्ठानका विषयमा चिन्तन गरेँ । भट्टको विषयमा सोच्न थालेँ । पूजाआजा गर्दा भारतीय र नेपाली भट्टले पुकार्ने नदीनाला तथा ईश्वरको नाममा फरक पर्छ । भारतबाट आउने पुजारीलाई नेपालको भौगोलिकलगायत विषयमा जानकारी हुँदैन । उसलाई कोसी, कर्णाली, गण्डकी, राराको विषय पनि जानकारी हुँदैन । उसलाई बरु काबेली, गोडाधुईको गंगा मन्त्रहरू प्रयोग गर्ने संकल्प सोहीअनुसार लिइन्छ । हामीले हिमवत्खण्डको हो भन्दा उनीहरू भारतखण्ड भन्छन् ।
तीन दिनसम्म गुप्तवास बसेँ । दैनिक ध्यान, पूजाका कर्मबाहेक बाहिरी घटनाबारे जानकारी लिन्थेँ । १६ पुसको बेलुका १७ गते मन्दिर प्रवेशका लागि समय निकालियो । पशुपति मन्दिरको पश्चिम ढोकाबाट बिहान साढे १० बजे प्रवेश गर्ने साइत जुर्‍यो ।
पूजाआजको पहिलो दिन
१७ पुसको राति मलाई निद्रा लागेन । भोलि पूजाआजाको पहिलो दिन कस्तो होला भन्ने भयो । बिहानै साढे ३ बजे उठेर नुहाएँ । आफ्नो नित्यकर्म गरे । पशुपतिको भट्टका लागि राजसी ठाँटको विशेष ड्रेस हुन्छ । त्यो ड्रेस पहिरिएँ । बिहानै बाजागाजासहित पशुपतिको परिक्रमा सुरु भयो । सबैभन्दा पहिला बागमती नदीमा संकल्प लिन गयौँ । पशुपतिमा ११ मन्दिर छन्, १० मन्दिर परिक्रमा गरी ११औँ प्रमुख मन्दिर परिक्रमा गर्दा पशुपतिको पश्चिम ढोकामा त ताल्चा लागिसकेको रहेछ ।
पश्चिमतिरको त्यो ढोका बिहान साढे ४ बजे खुल्नुपर्ने, तर बिहान साढे १० बजेसम्म खुलेको थिएन । ताल्चा लागेको थियो । साढे ८ बजे खुल्नुपर्ने पूर्वी ढोका तथा साढे १० बजे खुल्नुपर्ने उत्तर र दक्षिण ढोका पनि बन्द नै थिए । प्रहरीलगायत पशुपति कोषका कर्मचारी मिलेर ताल्चाको साँचो खोज्न थाले । राजीनामा दिएका भट्टदेखि भण्डारी बस्ने घर, डेरा चहार्दा पनि साँचो भेटिएन । बिहान बाजागाजासहित आएका मान्छे पनि बिस्तारै तितर–बितर हुन थाले । हुँदाहुँदै साढे १२ बजेतिर त म एक्लै भएछु । एउटा मान्छे नजिकै आएर भन्यो, ‘साँचो भारतीय दूतावास पुगिसक्यो, तपाईं यहीँ उभिइरहनुहोस् ।’ मैले आफूलाई थाहा नभएको जवाफ फर्काएँ मात्रै ।
दिउँसो साढे २ बजेतिर एक–दुईजना हुँदै फेरि मान्छेहरू जम्मा हुन थाले । कोही पूजा गर्नुपर्छ भन्न थाले भने कोही गर्नुहुँदैन । वादविवाद नै सिर्जना भयो । मन्दिरमा भट्टलाई प्रवेश गर्न दिइयो भने अनिष्ट हुन्छ भन्दै एकाथरीले भाषण गर्न थाले । अनर्गल प्रचार गरियो, सडकमा टायर बालेर विरोध भयो । १७ गतेको वातावरण यस्तो भयो कि, भगवान् नै छैनन् भन्ने भौतिकवादीहरू पनि अत्यन्तै अध्यात्मवादी भएर पूजा गर्नुपर्छ भनिरहेका थिए । भगवान् मान्नेहरू भने पूजा गर्नुहुँदैन भनिरहेका थिए ।
अन्ततः ताल्चा तोडेर भए पनि पूजा गर्नुपर्छ भन्नेहरूको भिड बढी भयो । अपराह्न ४ बजेतिर पश्चिमतिरको ढोकाको ताल्चा फोडेर मन्दिर प्रवेश गरियो । मैले आस्थाको केन्द्रमा पुगेर पूजा गर्न थालेँ । पशुपतिमा त्रिकाल पूजा हुन्छ । विशेष गरेर सूर्यलाई केन्द्रमा राखेर प्रातः, मध्याह्न र अपराह्न गरी पूजा हुन्छ । पुस महिनाको साढे ४ बजे त सूर्य पनि अस्ताइसकेको थियो । पशुपतिको चक्रको रूपमा पूजाआजा गरेँ । मन्दिरका ६ वटा शिर छन् । मन्दिरमा भएका ६ मुखमध्ये ४ वटा मुखको पूजा मूल भट्टले गर्छ । अरू तीनजना भट्टले एउटा शिरको पूजा गर्छन् ।
बिहानैदेखि मन्दिरको वातावरण असहज भएपछि पूजा गर्नका लागि सामग्री थिएन । मन्दिरका लागि जल बोक्ने ११ ब्राह्मण पनि थिएनन् । मैले बल्ल–बल्ल फकाएपछि तीनजना ब्राह्मण जल बोक्न तयार भएका थिए ।
दुबोलाई नै फूलको कल्पना गरेर पूजा गरेँ । अरू धेरै सामग्रीको अभाव हुँदा पनि कल्पना गरेर पूजा गरेँ । त्यहाँ श्रीयन्त्र पूजा गर्न धेरै समय लाग्छ । साढे ४ देखि साढे ८ बजेसम्म मन्दिरमा बसेर पूजा गरेँ । बेलुका पशुपति विकास समिति, सञ्चारकर्मी, प्रशासनलगायत बसेर पुस १८ गते मन्दिरमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो ।
चार भट्टको काम एक्लै गरेँ
मूल मन्दिरको पश्चिमतिरको मन्दिर भण्डारीले साढे ४ बजे नै खोलिसक्नुुपर्छ । तर, सबै भण्डारी असहयोग गरेर भागेका थिए । मैले साढे ४ बजे नै मन्दिर खोल्न लगाएँ । त्यसपछि भण्डारी र भट्ट दुवैको काम गर्न थालेँ । वास्तवमा भट्टले भक्तजनलाई छुँदैनन्, भण्डारीले नै भक्तजनलाई फूल–प्रसाद लिने–दिने काम गर्छन् । भण्डारी नभएपछि चार भट्टको काम मैले एक्लै गरेँ । ढोका खोल्ने काम पनि आफैँले गरेँ । १५ घण्टासम्म खटेँ । मैले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेँ ।
१९ गते बिहान साढे ८ बजेतिर एकजना युवतीले विक्षिप्त अवस्थामा जगल्टा छाडेर, पागल जस्तैगरी बोल्दै मन्दिर प्रवेश गर्ने भक्तजनलाई रोकेकी रहिछन् । यो वातावरणले मन्दिरमा पूजा भएको छैन भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ भन्ने लाग्यो ।
तिनलाई नियन्त्रण गर्न ६ जना पुलिसलाई पनि मुस्किल पर्‍यो । बाहिर कोकोहोलो मच्चिएको मैले भित्रबाट सुनेँ । मैले हेर्दा ती महिला सहज थिइनन्, पूरै काँपेकी थिइन् । वातावरण थप बिग्रिन सक्ने अनुमान लगाएँ । मन्त्र, जप पढेर फूल–अक्षता शिरमा राखिदिएपछि ती महिला आफ्नो बाटो लागिन् । त्यस दिन मन्दिरको पूजा नियमितजस्तै भयो ।
१९ गतेसम्म मैले भट्ट र भण्डारीकै जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ । तर, त्यस दिन बेलुकाचाहिँ अबबाट भण्डारीको काम गर्दिनँ भनेँ । अन्ततः जल बोक्ने ११ मध्ये तीन ब्राह्मणलाई भण्डारीमा नियुक्त गरियो ।
भोलिदेखि पूजा गर्नु नपर्ने खबर आयो
२० पुसको दिन बिहानै उठेँ । भण्डारी नियुक्त गरिसकेकाले ढोका खोल्न म जानुपरेन । बिहान आठै बजे मन्दिर प्रवेश गरेँ । जल बोक्ने ब्राह्मण पनि थिए । पूजा गर्दा अन्य दिनको तुलनामा सजिलो भयो । यो दिन अपराह्न ४ बजेसम्म पूजा गरेँ । बेलुका आरती पनि गरेँ । यही क्रम २३ गतेसम्म चल्यो । तर, २३ गते पूजा गरेर बेलुकाको आरती पनि सकेपछि भोलिबाट मन्दिरमा पूजा गर्न जानुपर्दैन भन्ने खबर आयो ।
यस्तो सुन्दा म आश्चर्यमा परेँ । यो विषयमा बाहिर धेरै विरोध भयो । भोलि प्रधानमन्त्रीले मेरो नियुक्ति बदर गर्दै छन् भन्ने खबर पनि पाएँ । केही बेरमा आफैँले आफ्नो चित्त बुझाएँ । सरकारको निर्णय स्वीकार गर्ने निधो गरेँ । भोलिपल्ट भयो, त्यही ।
मैले नेपाली भट्टका रूपमा पशुपतिमा सात दिन पूजा गर्ने अवसर पाएँ । दोस्रो वरियताको भट्टका रूपमा नियुक्त भए पनि मूल भट्टकै रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ । मैले भट्टबाट राजीनामा दिएको केही समयपछि भारतीय भट्टहरू नै पुनर्बहाली भएर काम गर्न थाले । भण्डारीहरू पनि नियमित काममा आए ।
#पशुपतिमा नेपाली भट्टका सात दिन